Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Nabata azụ na IMEX America Ugbu a Naanị Otu ụbọchị pụọ
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Education • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị otu IMEX nọ na saịtị ahụ.
Nnọọ! Ndị otu IMEX nọ na saịtị ahụ na-anabata nnabata nke ọma na obodo mmemme azụmahịa mba ụwa ga-ezukọ na IMEX America, na-ewere ọnọdụ n'izu a.
Naanị otu ụbọchị, IMEX America ga-emepe na Las Vegas na Mandalay Bay.
Nke a bụ 10th mbipụta nke mmemme IMEX America nke ga-amalite na Nọvemba 9-11.
A na-akwụ ụgwọ ihe omume a dị mkpa dị ka "ọbịbịa maka ụlọ ọrụ," ma bụrụ ihe omume mba ụwa mbụ mere na America mgbe US wepụrụ mmachibido njem njem mba ụwa.
Emere ihe ngosi a na Nọvemba 9 – 11 na Las Vegas, bu ya ụzọ, site Smart Monday, nke MPI kwadoro, na-ewere ọnọdụ taa. Otu nnukwu akụkụ nke mpaghara ihe omume azụmahịa zuru ụwa ọnụ ga-agbakọta ọnụ iji rụkọọ ọrụ, mee azụmahịa na ịmụta n'oge a dị ịrịba ama maka mpaghara ahụ.
IMEX America a kwadoro ya dị ka "homecoming maka ụlọ ọrụ" na e nwere ọtụtụ ihe kpatara ememe n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ - ọ bụghị nanị na IMEX America nwere ụlọ ọhụrụ, Mandalay Bay, ọ bụkwa mbipụta nke iri nke ihe ngosi ahụ.
Ewepụtara echiche IMEX na Septemba 2001 yana ihe ngosi izizi ya na Eprel 2003 na Frankfurt na nnukwu ọnụ ụlọ Messe Frankfurt na 2005 wee meghere IMEX America na Las Vegas na October 2011.
Mmemme ịzụ ahịa anabatara pụrụ iche, usoro nhọpụta n'ịntanetị, usoro azụmaahịa mbụ, yana ụzọ mmekọrịta na-ewepụta IMEX iche. Ọhụụ ihe omume bụ nke ụwa ebe ezigbo azụmahịa na-agafe ókèala yana ebe ndị na-eme atụmatụ nzukọ zuru ụwa ọnụ na ndị na-ebubata nwere ike jikọọ ngwa ngwa.
Ebumnobi nke IMEX bụ mgbe niile ịbụ ihe karịrị onye nhazi ihe ngosi. IMEX etinyela onwe ya na etiti ụlọ ọrụ nzukọ, ma chepụta ihe ngosi ya iji nyere ndị sonyere aka ịmụta, jikọọ, na ịzụ ahịa. Ihe mmalite nke nọ na IMEX kemgbe mmalite ya gụnyere mmemme onyinye, Association Focus, Future Leaders and Policy (ndị bụbu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị) Nzukọ - ugbu a gụnyere ihe omume gụnyere Exclusively Corporate, She Means Business, na Smart Monday.
Mmemme agụmakwụkwọ IMEX etoola site na seminarị iri atọ na ihe ngosi mbụ ya ruo 30-gbakwunyere na ihe ngosi ọ bụla taa. Otu IMEX na-arụkọ ọrụ na ndị mmekọ iji mepụta ihe omume - na ndị mmekọ a ebutela ihe omume nke ha na ihe ngosi IMEX, site na SITE Nite na MPI Rendezvous ruo nzukọ ndị òtù ICCA kwa afọ. IMEX na-aga n'ihu na-edozi ahịrị ihe omume ya ka ụlọ ọrụ na-agbanwe ma na-etolite.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike gbanwee n'ime afọ iri gara aga ma ọ bụ karịa, ihe na-agbanwebeghị bụ ọchịchọ ndị mmadụ ịbịakọta ọnụ. Mmekọrịta onwe onye siri ike n'ime ụlọ ọrụ ahụ bụ isi ihe ịga nke ọma nke ihe ngosi IMEX. Ọ bụ ezie na ndị otu IMEX nwere ihe karịrị okpukpu anọ na nha ndị ọrụ, ọtụtụ n'ime ndị ọsụ ụzọ mbụ ka bụ akụkụ nke otu na ezinụlọ.